Nezvedu - Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co, Ltd.
Ultrasonic Keke Chikafu Chekucheka
20Khz Ultrasonic Kucheka
40Khz Ultrasonic Kucheka
Ultrasonic Mucheka Plastiki Anocheka
30Khz Ultrasonic Kucheka
35Khz Ultrasonic Kucheka
Ultrasonic Mask Welding Sisitimu
15Khz Ultrasonic Welding Sisitimu
20Khz Ultrasonic Welding Sisitimu
Ultrasonic Metal Welding Muchina
Ultrasonic Simbi Spot Welder
Ultrasonic Tube Inopedzisa
Ultrasonic Welder yeSolar Heat Kuunganidza
Ultrasonic Plastiki Welding Machine
15Khz Ultrasonic Plastiki Welder
20Khz Ultrasonic Plastiki Welder
Ultrasonic Rotary Kuisa Sisitimu System
20Khz Ultrasonic Michina Welding Sisitimu
35Khz Ultrasonic Michina Welding Sisitimu
Ultrasonic Spot Welding Sisitimu
15Khz Ultrasonic Simba Rinopa
20Khz Ultrasonic Simba Rinopa
28Khz Ultrasonic Simba Rinopa
30Khz Ultrasonic Simba Rinopa
35Khz Ultrasonic Simba Rinopa
60Khz Ultrasonic Simba Rinopa
70Khz Ultrasonic Simba Rinopa
15Khz Ultrasonic Inoshandura
20Khz Ultrasonic Inoshandura
28Khz Ultrasonic Inoshandura
30Khz Ultrasonic Inoshandura
35Khz Ultrasonic Inoshandura
40Khz Ultrasonic Inoshandura
60Khz Ultrasonic Inoshandura
Ultrasonic Kutsiva Shanduri
15Khz Ultrasonic Transducer neBooster
20Khz Ultrasonic Transducer neBooster
28Khz Ultrasonic Transducer neBooster
30Khz Ultrasonic Transducer neBooster
35Khz Ultrasonic Transducer neBooster
40Khz Ultrasonic Transducer neBooster
60Khz Ultrasonic Transducer neBooster
70Khz Ultrasonic Transducer neBooster
Ultrasonic kushandisa michina Spraying Midziyo
Ultrasonic Kushandisa System
Ultrasonic Metal Powder Sisitimu
Ultrasonic Nano Mwaya
Ultrasonic Liquid Kurapa Midziyo
Ultrasonic Yekuongorora Sonochemistry
Ultrasonic Maindasitiri Sonochemistry
Ultrasonic Tsvina Kurapa Sisitimu
Ultrasonic Isiri-yakajairwa Yakasarudzika Zvigadzirwa
Ultrasonic Yekuongorora Midziyo
Ultrasonic Impedance Ongororo
Hangzhou Qianrong kushandisa michina Equipment Co., Ltd. ndiyo nyanzvi inogadzira yekutsvagisa kweiyo ultrasonic, yakakwira simba ultrasonic transducer kuvandudza uye kugadzira muChina. Zvigadzirwa zvedu zvikuru ndezvekutengesa, simba remagetsi, magetsi esimbi welder, ultrasonic waya kanyanga zvikamu nezvimwe zvakadaro. Izvi zvinogadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana siyana, senge kupisa kwepurasitiki, simbi yekumonera, isina-yakarukwa yekuisa chisimbiso uye kucheka zvichingodaro Kubva Qianrong Equipment kuisirwa, kambani yakagara yakanangana nezvinodiwa nevatengi. Ndichiri kuongorora musika wepamusha muChina, isu tinoratidza zvakare yedu kambani ultrasonic tekinoroji kune nyika. Hunhu hwayo uye mashandiro ayo anozivikanwa muindasitiri.
Kuomerera kune "tarisa pane ultrasonic kunyorera, mukutenda kwakanaka kuhwina vatengi, kuhwina mukurumbira wehunhu" budiriro chinangwa, kuva mutungamiriri anotungamira wepasi rose weiyo ultrasonic musimboti zvikamu, kuburikidza neyedu nyanzvi yehunyanzvi uye isingaregi kuedza, mhando zvigadzirwa kune vatengi mune kuvandudzwa kweiyo indasitiri kugadzira yakanyanya kukosha kudzoka.
Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co, Ltd. iri kuita bhizimusi rekutengesa rema ultrasonic transducers uye ultrasonic Welding Machine pasirese munyika dzinopfuura makumi mana.
Semutengesi mukuru wehunyanzvi ultrasonic zvikamu, Qsonic ine yakakura chigadzirwa ruzivo uye rwemberi ruzivo, saka isu tine chivimbo chekuti tinogona kuzadzisa zvaunoda. Panguva imwecheteyo, zvigadzirwa zvedu zvinonzwisisika mumutengo uye mhando yepamusoro, kuitira kuti vatengi vedu vagone kukwikwidza mukana.
Nekuvandudzwa kwekambani, isu tine timu yakanaka kwazvo. Isu tinopa kwete zvigadzirwa zvakajairwa chete, asiwo zvetsika zvigadzirwa zvakavakirwa pane zvakadzama dhirowa kana sampuli.
QRsonic inopa akawanda maOEM masevhisi kune ayo vatengi. Mutengi wevatengi anogona kudhindwa pane iyo ultrasonic transducer uye ultrasonic michina.
Isu tinotarisira nemoyo wese mukana wekukushumira iwe uye uve mudiwa wako munguva pfupi iri kutevera. Ngatishandei pamwe chete kuti tigadzire yakakura-ye-kukosha kudzoka mukuvandudza indasitiri ine zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Hangzhou Qianrong kushandisa michina Equipment Co., Ltd.
Runhare: 0086- (0) 571-58977669